Jawaab laga bixiyey inuu Coronavirus dib u dhigi karo doorashada Soomaaliya? | Xaysimo
Home War Jawaab laga bixiyey inuu Coronavirus dib u dhigi karo doorashada Soomaaliya?
Jawaab laga bixiyey inuu Coronavirus dib u dhigi karo doorashada Soomaaliya?
Guddiga wadajirka ku meel gaarka ah ee diyaarinta xeerarka dhammeystirka sharciga doorashooyinka Qaranka ee Somaaliya ayaa sheegay inay si ku meel gaar ah u hakiyeen howlihi ay wadaan, coronavirus awgiis.
Mar uu arrintaas sharraxayay ayuu yiri: “Guddiga meel ma kala jiro, magaalada Muqdisho ayuu joogaa oo aqlabiyaddiisa ugu badan tahay, shaqadiisuna halkaasi ayuu ka wataa…laakiin isu keenidda dadka iyo hawlihii iyo safarradii aan geli lahayn baan suuroobeynin , taas baan hakinnay kaddib markii aan la tashiyo sameynay. Waan wadi doonaa shaqadeenna, haseyeeshee qoraal iyo in shaqadii aan guryaheenna ka sii wadno innaga oo qalabkii tiknoolajiyadda adeegsanayno aan wadno ma reebana. Waana ku ballannay, xubnihii guddigana waa ay iska warqabaan waa ayna soconaysaa hadduu Alle idmo”.
Guddoomiyaha Guddiga wadajirka ku meel gaarka ah ee diyaarinta xeerarka dhammeystirka sharciga doorashooyinka Qaranka ee Somaaliya, oo su’aashaas ka jawaabaya ayaa yiri: “Guddiga wax badan baa uga qabsoomay qorshihiisi. Markii uu isku yimid oo doorasho sameeyay oo uu is-dhisay oo gudihiisa is doortay, xeer-hoosaad buu sameystay oo loo marayo habraacii lagu diyaarin lahaa shuruucdaasi, qorshe hawleedkii guddiga oo waqtiyaysan ayuu sameystay oo noo soo dhammaan lahaa haddii cudurkan uusan na dhexgeli lahayn, taasna bisha May baan ku soo dhameyn lahayn”.
“Guddigu ma rabo inuu kaligiis iska tashado oo intuu waraaqo qoro baarlamaanka geeyo. Guddigu wuxuu rabaa in talooyinka dadka wax leh oo saamileyda siyaasadda ahi oo axsaabta xitaa ku jiraan intay ka uruuriyaan in ay baarlamaanka geeyaan. Markii ugu horreysayba waxaa shaqadeenna ka billownay inaan la tashanno dhinacyada ay ka mid yihiin guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka iyo hay’adihii kale oo arrimahaasi ay khuseeyeen oo ururada bulshada ay ka mid yihiin iyo guddigii markii hore sharciga doorashooyinka soo diyaariyay ee labada aqal,” ayuu yiri Ibraahim.
Ilaa hadda shan kiis oo cudurkan ah ayaa laga soo tabiyay Soomaaliya, sida lagu muujiyay liiska tirakoobka kiisaska coronavirus ee ay sameysay Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO.
Xukuumadda Federaalka ayaa sidoo kale sheegtay in ilaa iyo amar dambe ay sii xirnaan doonaan Duullimaadyada dibadda iyo gudaha, iskuulada, dugsiyada Qur’aanka iyo jaamacadaha, isagoona dhinaca kale carrabka ku dhuftay iney lagama maarmaan tahay in la joojiyo dhammaan xafladaha iyo in sare loo qaado foojignaanta fayraska Corona.